Wararka naga soo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka xogwaramay dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidanka gumaysiga Itoobiya lagu naafeeyay. Dagaaladan oo isugu jiray weeraro mir ah iyo qaar maalin ah ayaa cadawga lagu gaadhsiiyay qasaare laxaadleh oo isgu jira naf iyo maal. Waxaa kaga bakhtiyay gumaysiga askar darooji kala duwan lahaa oo inta lahubsaday bakhtigooda gaadhaya 40askari iyo dhaawaca badan. Dagaaladaa ayaa u dhaceen sidan;
13/1/14 Aqalayowga oo tuulada Yucub ee Gobolka Doollo katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya kudhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilat 2 askari tiro aan laxaqiijinina waa laga dhaa wacay.
13/1/14 Shucayb oo Dudumo-cadka katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari.
16/1/14 Golguduud oo Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/1/14 Candhofidiye oo dagmada Xamaro katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 4 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/1/14 Gasaangas oo Xamaro katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa cadawga lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa laga dhaawacay.
19/1/14 Darida oo Dhuxun katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay kugubeen 1 baabuur oo kuwa ciidamadu qaataan ah sidookale waxay rasaas kufureen baabuur kale oo lasocotay gaadhiga gubtay waxayna kudileen inta lahubo 15 askari 18 kalana way kudhaawaceen.
20/1/14 Simane oo Baabili katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari.
25/1/14 Quruuruxle oo Xamaro katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 5 askari.
25/1/14 Xeromaygaag oo Xamaro katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidan uu gumaysigu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa ciidankii wayaanah lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin lagahaynin.
27/1/14 Fiiqwayn oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.